merolagani - बजेटमा बीमा प्राथमिकतामा, कर्मचारी, जेष्ठ नागरिक र पत्रकारलाई थप सुविधा
May 29, 2018 Merolagani
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले बीमा क्षेत्रलाई प्रथमिकता दिएको छ । मन्त्री खतिवडाले बजेट विवरण प्रस्तुत गर्दै कृषि तथा स्वास्थ्य बीमा निरन्तरता दिदै लघुबीमा, जेष्ठ नागरिक, पत्रकार र कर्मचारी बीमालाई समेट्दै प्राथमिकता दिएका छन् ।
सरकारले बजेट मार्फत कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । उच्च प्राथमिकतामा परेको कृषि क्षेत्रलाई ५ वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर पार्ने घोषणा गरेका छन् ।
कृषि जन्य उत्पादनको बृद्धिकालागि मुल्य श्रृखलामा आधारित उत्पादनको विस्तार र थप कृषि व्यवसायिकरण गर्न कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको बीमालाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले यस अघि दिदैं आएको कुल बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदानलाई निरन्तरता दिएको हो । कृषि बीमाको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले स्वदेशमै व्यवसाय गर्नेहरुलाई व्यसायको सुनिश्चितको प्रत्याभुत गर्न व्यवसायको बीमालाई प्रोत्साहान गरेको छ । लघुबीमा कार्यक्रम मार्फत न्युन आय भएकाहरुलाई पनि बजेटमा विशेष समाबेश गरिएको छ । गरिब जनताको जोखिम न्यूनिकरण गर्न र बीमाको पहुँच बिस्तार गर्न अर्थमन्त्रीले लघु बीमालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरका छन् ।
बीमा कम्पनीलहरुले आफ्नो ब्यवसायको १० प्रतिशत अनिवार्य लघु बीमा गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । नेपालमा संचालित बीमा कम्पनीहरुले बीमा लेखाङ्कको न्युनतम २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा नेपालको एक मात्रै पुर्नबीमा कम्पनी नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीमा पुर्नबीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत संचालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमालाई पनि निरन्तरता दिएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने उल्लेख गर्दे आधारभुत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मुलुकभर विस्तार गरिने बजेट बक्त्तव्यमा उल्लेख छ ।
यस्तै पत्रकार दुर्घटना बीमा र पत्रकार वृत्तिकोषलाई पत्रकारको हित र कल्याणमा परिचालन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि नगरेपनि महंगी भत्ता २ हजार र पोशाक सुविधा वृद्धि गरी १० हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । यस्तै कर्मचारीहरुको सावधिक जीवन बीमाको बीमाङ्क वृद्धि गरी दुईलाख पुर्याएको छ । बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत नेपाल सरकार र ५० प्रतिशत कर्मचारी आफैले ब्योहोनु पर्ने बजेट वब्त्तब्यमा उल्लेख छ ।
सरकारले घोषण गरेको बजेटले जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति लगायतलाई हाल राज्यले दिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्दै अन्य सुबिधाहरु बृद्धि गर्दै लाने जनाएको छ । वृद्धभत्ता नबढाए पनि बरु बृद्धवृद्धाको उपचार खर्चमा ७० वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकहरुलाई एक लाख सम्ममा बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले व्योहोर्ने जनाएको छ ।
स्पर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था (SPARSHA) ले निष्काशन गरेको साधारण शेयर (आईपिओ) चैत १० गते आइतबार बाडँफाँड हुने भएको छ। बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलले आइतबार शेयर बाँडफाँड गर्ने जनाएको हाे।
दुई वाणिज्य बैंक सहित तीन कम्पनीको बोनस सूचीकृत, खातामा प्राप्त भएपछि कारोबार गर्न सकिने
हिमालयन बैंकले फेरि जारी गर्ने भयो ऋणपत्र, कति पाइन्छ ब्याज ?
एभरेष्ट बैंकका ग्राहकहरुले १० प्रतिशत नगद फिर्ता पाउने
अर्थशास्त्री प्राध्यापक दाहाल रहेनन्
जनताको जलबिद्युत कार्यक्रमलाई जनताले विश्वास कसरी गर्ने ?